【Yan·Ouyu~Fengyu Xiaoyue Court】Indawo ebukekayo yaseWanfenglin/Enengadi Yophahla/EneTerace/Amagumbi amane okulala, Amagumbi okugezela amabili okuhlala-Amathathu I-Duplex Bungalow/Nordic Light Luxury - I-Airbnb
【Yan·Ouyu~Fengyu Xiaoyue Court】Indawo ebukekayo yaseWanfenglin/Enengadi Yophahla/EneTerace/Amagumbi amane okulala, Amagumbi okugezela amabili okuhlala-Amathathu I-Duplex Bungalow/Nordic Light Luxury
Qianxinan, Guizhou, i-China
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Echo
U-Echo Ungumbungazi ovelele
I-Xiaoyue Court iyi-bungalow enamagumbi okulala amane, okuhlala amabili namagumbi okugezela amathathu anebha yezincwadi, ithala kanye nama-balcony amakhulu amathathu esitezi esiphezulu nesingaphansi.
Igumbi ngalinye kulawa amane linezici zalo. Kukhona umbhede owodwa omkhulu ophindwe kabili nombhede owodwa ojwayelekile ophindwe kabili; omunye uyigumbi elijwayelekile elinemibhede yabafundi ababili, kanti omunye umbhede we-tatami wabantu abathathu.
Kunekhishi elivulekile elihlome ngokuphelele esitezi sokuqala, lapho ungasebenzisa khona ngokugcwele amakhono akho okupheka; kunomshini ozenzakalelayo we-mahjong ozenzakalelayo, lapho wena nabangane bakho ningajabulela khona ubuhle be-quintessence yobuciko. Uma ungumuntu othanda ukuqina, u-Xiaoyueyuan ukulungiselele amathuluzi wokuqina alula; uma ungumfundi, ikhona lokufunda elakhiwe ngezitebhisi liyatholakala ukuze wena nabangane bakho nilifunde ebusuku.
Ukwehla ezitebhisini kuya esitezi sesibili, usofa omncane owolintshi kanye nesithombe sentombazane esofeni sibonisa izici zesitezi sesibili: ubuntwana. Upiyano lukagesi lubekwe egumbini lokuphumula esitezi sesibili, elingaxazulula ukungqubuzana kokuthi umfana wepiyano akakwazi ukuzilolongela upiyano lapho ehamba. Iguqulwe yaba ithala elincane elinelanga, kukhona ibhodi lokubhalela izingane; kukhona okuqagelayo kokuzijabulisa kwabantu abasha. Kuhle kakhulu ukulala ethafeni futhi ubheke phezulu ezinkanyezini elangeni.
Ukuphela kwendlu yonke ingadi yophahla elungiswe kabusha. Yeka ukuthi kuhle kangakanani, ngicela uzibukele izithombe. Ngifuna ukosa inyama, akunankinga, zenzele engadini yophahla; ngifuna ukumisa itende, akunankinga, ukumisa itende engadini yophahla; ngifuna ukuchitha inyanga, akunankinga, klama itulo lothando engadini yophahla ~
Ngamafuphi, u-Xiaoyueyuan ufuna ukukunikeza ikhaya elifudumele nelinothando phakathi nohambo lwakho.
Indlu yezwe yamaNgisi inoveli ka-Austin ayilutho ngaphandle kwalokhu...
I-bungalow eyi-duplex enamagumbi okulala amane, amagumbi okuhlala amabili namagumbi okugeza amathathu anengadi yophahla
Ukubuka kwesibhakabhaka okugcwele izinkanyezi
I-Xiaoyue Garden itholakala e-Wanfenglin Scenic Area, okuyindawo ye-villa eseduze ne-Wanfenglin Scenic Area. Ngaphesheya komgwaqo osuka eNalu Village, kunebhodwe elishisayo elinamahlumela oqalo olumuncu nenhlanzi enezici zika-Buyi. Ukuqala emphakathini, ukuhamba amakhilomitha ama-2 yi-bazaar ye-nostalgic. Kusukela emakethe yokukhumbula ikhaya, eduze nemigwaqo yezwe, unqamula esigodini saseBuyi, e-Yulong Village, ungafinyelela e-Wanfeng Forest Park. Kunomugqa wezivakashi okhethekile esangweni lomphakathi, ongafinyelela ngqo eWanfenglin naseMalinghe Grand Canyon, futhi ungasetshenziswa futhi ukungena edolobheni. Kunamabhasi endawo kuNalu Village Street, angagcini nje ngokuholela edolobheni, kodwa nasezigodini ezahlukene.
Ngingumhambi nginendawo yokuhlala yasekhaya. Ngizimisele ukuxhumana nabangane abama ku-Xiaoyueyuan nganoma yisiphi isikhathi ngocingo, i-inthanethi ne-imeyili, ngilalela izindaba zomunye nomunye kanye nokuqonda ukuphila.
UEcho Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Qianxinan namaphethelo